चर्चित प्रस्तोता रमेश प्रसाई र नन्दालाई पहिलो सन्तान प्राप्त, बधाईको ओईरो
November 30, 2021 adminLeaveaComment on गगन थापाले भने रे पुन्य गौतम बाहेक म सँग कसैले वा,दविवाद गर्न सक्दैन, पुन्यले खुलाए आफु चुनाव ल,ड्ने जित्ने अनि मन्त्री हुने सुत्र (भिडियो सहित)
सामाजिक सन्जालमा व्यस्थ अनि चर्चित पुन्य गौतमले एक वि,वादित आफ्नो तर्क राखेका छन । उनले भनेका छन यो चुनावमा यस्तै हो भने नेपाली काँग्रेसले चुनाव नजित्ने भावना व्यक्त गरेका छन । अझ पुन्यले गगन थापालाई भने ” मैले सुनेको छु गगन थापाले भन्नु भएको रे म सँग वा,दविवाद गर्न सक्ने भनेको पुन्य गौतम मात्र हो”। […]
November 30, 2021 adminLeaveaComment on बेहुलिको न क्क लि आँखा खस्यो ,भयो हं गा मा (हेर्नुस् भिडियो )
काठमाडौँ छोरिले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ । छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्तकालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भाविपुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो । सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो […]
November 30, 2021 adminLeaveaComment on चर्चित प्रस्तोता रमेश प्रसाई र नन्दालाई पहिलो सन्तान प्राप्त, बधाईको ओईरो
काठमाडौ । चर्चित प्रस्तोता रमेश प्रसाई र उहाँकी श्रीमती नन्दा सिंह प्रसाईलाई पहिलो सन्तान प्राप्त भएको छ । एक अर्कामा बैबाहिक जीवनमा बाधिएको करिब डेड बर्षपछि उहाँहरुलाई पुत्री लाभ भएको हो । घरमा पहिलो सन्तानको रुपमा लक्ष्मी आएको भन्दै रमेश र श्रीमती नन्दाले खुशीयाली मनाउनुभएको छ । उहाँहरुलाई दुनियाँभरीबाट बधाई आइरहेको छ । बैबाहिक जिवनमा […]
November 30, 2021 adminLeaveaComment on विश्व चकित पर्ने खबर बाहिरियो, वैज्ञानिकले बनाए सन्तान जन्माउन सक्ने रोबोट
काठमाडौ । यो खबर बाहिर आएसँगै विश्व चकित बनेको छ । अब मानिसलाई प्रविधिले विस्थापित गरेको छ । यो ड’र पहिलेदेखि नै थियो । भर्खरै अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले बनाएको जीवित रोबोटले सन्तान जन्माउन सक्ने भएको छ । अमेरिकी वैज्ञानिकले बनाएको जिनोबोट नामक जैविक रोबोटले वनस्पति र प्राणीको भन्दा फरक तरिकाले सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने सीएनएनले प्रमुख […]
November 30, 2021 adminLeaveaComment on सोमवार काठमाडौ विमानस्थलमा भएको त्यो घटना…
काठमाडौ । काठमाडौ स्थित विमानस्थलमा निकै ठूलो घटना भएको छ । विमानस्थल भन्सार कर्मचारीले निकै ठूलो परिमाणमा सुन बरामद गरेका छन् । विदेशबाट फर्किनेहरूले ल्याएको बाला आकारको २१ किलो सुन बरामद भएको हो । सोमबार खाडी मुलुकबाट फर्किनेहरूले बाला बनाएर लगाएर ल्याएको २१ किलो सुन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले बरामद गरेका हुन् । काँचो सुनलाई […]
टिकटकमा चर्चित हुन जब यी युवती बिच सडकमा नाच्न थालिन्, त्यसपछि के भयो? (भिडियो हेर्नुहोस्)
November 30, 2021 adminLeaveaComment on टिकटकमा चर्चित हुन जब यी युवती बिच सडकमा नाच्न थालिन्, त्यसपछि के भयो? (भिडियो हेर्नुहोस्)
एक चर्चित भिडियो बनाउन को लागी, सोशल मिडिया अझ टिकटक चलाउनेहरु के सम्म गर्न सक्छन् आजकल भन्ने उदाहरण त नेपालमा बेला बेलामा देखिएकै छ । तर एक इन्स्टाग्रामरलाई भने यस्तो हरकत गरेका काण कारण समस्या परेको छ । भारत इन्दौरकी एक युवतीको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ जसमा उनी ट्राफिक सिग्नल मा बत्ती […]
यिनै हुन् देउरानी जेठानी मिलेर मारेका देवोर…………….
November 30, 2021 adminLeaveaComment on यिनै हुन् देउरानी जेठानी मिलेर मारेका देवोर…………….
सल्यानमा परिवारभित्रै निकै ड’र’ला’ग्दो घटना भएको छ । दुई देउरानी जेठानी मिलेर एक जना युवकको ह ‘त्या ग’रे’को घटना सार्वजनिक भएको छ । घटनामा लक्ष्मी चन्द र राधा चन्द सं’ल’ग्न भ’ए’को भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटनापछि राधाको सासुले आफुलाई पनि बुहारीले झण्डै न’मा’रेको बताउँछिन् । उनले आफु घर भएर पनि बुहारीका कारण […]
November 30, 2021 adminLeaveaComment on ‘टिकटक क्विन’ रेश्माको विवाहमा वर्षाको रमाइलो, को को पुगे विराटनगर ?
काठमाडौँ । ‘टिकटक क्विन’ उपनामले परिचित नायिका तथा मोडल रेश्मा घिमिरेले सोमबार विवाह गरेकी छन् । उनले एक वर्ष अगाडि नै इन्गेजमेन्ट गरेकी थिइन् । प्रेमीसंग एक वर्ष अघि नै विवाह निश्चित गरेकी उनले सोमवार विवाह गरेकी हुन् । उनको विवाह अमेरिकामा बस्दै आएका प्रभात बाबुसँग भएको हो । रेश्मा र प्रभातको विवाह विराटनगरको एक […]
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भित्रन नदिन विमानस्थलमा यस्तो सतर्कता अपनाईदै
November 30, 2021 adminLeaveaComment on कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भित्रन नदिन विमानस्थलमा यस्तो सतर्कता अपनाईदै
काठमाण्डाै – कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भित्रन नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । काेभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय समिति सीसीएमसीसीले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको नयाँ भाइरस अरु देशमा पनि फैलन थालेको हुँदा सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर अहिलेसम्म कुन-कुन देशबाट आउनेलाई कति हप्तासम्म प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने बारेमा […]
November 30, 2021 adminLeaveaComment on कास्कीमा बस दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु , आठ जना घाइते
काठमाडौँ : कास्कीमा यात्रवाहक बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ पाउदुरमा भैरहवाबाट बागलुङका लागि छुटेको बस सडकबाट ३० मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा घाइते भएका बस चालक पाल्पाका भुपनाथ खनालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा बागलुङका शिवराम शर्मा, कृष्ण खड्का, राजु श्रेष्ठ, उमलाल श्रेष्ठ, सुवर्ण सापकोटा, […]